Search ​ချော်​င်း​ရိုက်​လိုးကား - BajarFB.com
Search Results - ​ချော်​င်း​ရိုက်​လိုးကား
အပျိုမိန်းက​လေးအား ဂျင်​န်​၏ အစရ်​ရှိ​နေ၍ ၄င်းအားကုသရာ ​အောင်​မြင် ဆရာနူးဟျ 18 Oct 2020 · 29K views
ပိုက်ဆံပေးခေါ်တိုင်း မလိုက်တဲ့ သူတောင်းစား ! ☎️ ဖုန်းနံပါတ် -09 256070900 , 09 73206348 ============================ Zawgyi ရန်ကုန်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ ♦️ မြောက်ဒဂုံ 👉🏾 နေလင်းဆေးဆိုင် 👈🏾 သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းနှင့်ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းထောင့် (32)ရပ်ကွက် , 📞 09-771104806 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ - ကိုသော်ဇင် (ကိုယ်စားလှယ်) 📞 ‭09-426093455‬ - ပိတောက်လမ်းမ ၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ ခြောက်ကွေ့မှတ်တိုင်အနီး ♦️ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် 👉🏾 မိုးနတ်သူဇာ ဆေးဆိုင် 👉🏾 ရွှေမင်္ဂလာဈေး, တတိယထပ် ဆိုင်အမှတ် (376) 📞 09-791729121 ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 သရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၆၁ (င) ၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင် အနီး ၊📞 09-5311334 ။ ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 တိုကျို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၀ ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ 📞 01-510921 ။ ♦️လှိုင် 👉🏾 ရွှေသရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၃/၈၄ ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ဘူတာရုံလမ်း ၊ သုခ မှတ်တိုင် ၊ 📞 01-516438 ။ 💜 ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 🔈မင်္ဂလာဈေး ၊ ဆိုင်အမှတ် B 50-51 ၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး ဒုတိယထပ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ 📞 09-421007783 ။ 🔹 ကမာရွတ် 👉🏾 အိန်ဂျလာ Beauty Saloon 👈🏾 တိုက်အမှတ် ၁ ၊ အမှတ် ၁ ၊ အောင်မြင်သာစည် အိမ်ရာ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-792233119 ။ 🔹 စမ်းချောင်း 👉🏾 ခိုင်မာလာနှင်းဆီ Beauty Saloon 👈🏾 မင်းလမ်း , 📞 09-795740237 🔹 တာမွေ 👉🏾 Chit Tha Mee Pharmacy 👉🏾 အသောကမှတ်တိုင်, သူကြွယ်လမ်း , 📞 09 771227400 ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 ဆရာမ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၃ ၊ ထန်းတပင်လမ်း ၊ ဆရာမ ဆေးဆိုင် ၂ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင် ၊ 📞 09-771136091 ♦️ စမ်းချောင်း (မြေနီကုန်း) 👉🏾 မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 မြေနီကုန်း ပန်းခြံ ထဲ , 📞 09-5154931 ♦️ တာမွေ 👉🏾 ကိုဥာဏ် (Ko Nyan - General Services Co.Ltd) 👉🏾 အမှတ် ၅၄၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်လမ်း၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ဂီတအစည်းအရုံုး မျက်နှာချင်းဆိုင် ။ ♦️ ပန်းပဲတန်း 👉🏾 ချိုမေတ္တာ ဆေးခန်း နှင့် ဆေးမျိုးစုံ 👈🏾 ၂၉လမ်း အမှတ်-၆၉ ၊ အလယ်ဘလောက် ။ 📞 09-5108505 ♦️ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 👉🏾 ရှိုင်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၀၀၄ ၊ တိုက် ၁၁/၅လမ်း ၊ ယုဇန ဥယျာဉ် အိမ်ရာ ။ 📞 09-421078241 ♦️ ပန်းဘဲတန်း 👉🏾 စု မိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၂၉ လမ်း ၊ အောက်ဘလောက် ၊ ကုန်သည်လမ်းထိပ် ၊ လမ်း ၃၀ မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-250045436 ။ ♦️ ပုဇွန်တောင် 👉🏾 ရွှေပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၉၅ ၊ ရေကျော်လမ်း ၊ ပုဇွန်တောင်ဈေး မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-421025453 ။ ♦️ မင်္ဂလာဒုံ 👉🏾 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အောင်စေ ဘုရားလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက် ။ 📞 09-421168809 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 သီရိ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သမိုင်း လမ်းဆုံ ။ Hyundai Car Showroomနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 09-791444056 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာရိပ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀ မိုင်ကုန်း ၊ ဈေးတာဝန်ခံ ရုံးရှေ့ ။ 📞 09-253350272 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာဦး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၆ ၊ ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း ၊ ၃ ရပ်ကွက် ။ 📞 09-789789214 ♦️ ရန်ကင်း 👉🏾 စံဆေးဆိုင် 👈🏾 ဆရာစံလမ်း , ရွှေပုပ္ပါးဆေးခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 09-970083099 ♦️ရန်ကင်း 👉🏾 သစ္စာဦးဆေးဆိုင် 👈🏾 ကန်ဘဲ့ဘူတာဈေးလမ်း , မိုးကောင်းမှတ်တိုင် , 📞 09-790135608 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 SUPER ONE 👈🏾 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 စိန်ဂေဟာ 👈🏾 ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ပွင့်သစ်ထွန်း (၃) ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မီးခွက်ဈေး ၊ အ.မ.က ၂၂ ကျောင်းရှေ့ ။ 📞 09-420024670 ♦️လှိုင်သာယာ 👉ရွှေမေတ္တာဆေးဆိုင် 👈 ပင်လုံဈေး , စစ်တွေလမ်း , 📞 09-420024670 ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ရွှေရင်အေး ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၆၁၇ ခ ၊ အလောင်းဘုရားလမ်း ၊ ၁၉ ရပ်ကွက် ။ 📞 09-420024670 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 AAA ဆေးဆိုင် 👈🏾 Junction ဇဝန အနီး ။ 📞 01-573936 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 လပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 စံပြ ၃ လမ်း ၊ စံပြဈေး အနီး ။ 📞 01-8551138 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း (သုဝဏ္ဏ) 👉🏾 ဆွေမဟာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 ရေနသာလမ်း ၊ ရေနသာဈေးရှေ့ ၊ ၂၄ ရပ်ကွက် ၊ ရေစက်မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-5403809 ။ ♦️ သန်လျင် 👉🏾 ပစ်တိုင်းထောင် ဆေးနှင့်စတိုး 👈🏾 အမှတ် ၁၃ ၊ ရွှေသရက်လမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာမှတ်တိုင် ၊ 📞 09-428116002 ။ ♦️သန်လျင် 👉🏾 လေဆာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သံလျင်ဈေး အပြင်ဘက်တန်း ၊ ORANGE ဘက် အခြမ်း ။ 📞 09-250347483 ♦️ သာကေတ 👉🏾 စိန်စီ ဆေး နှင့် စတိုး 👈🏾 3B ဧရာဝဏ် လမ်း ၊ သာကေတအဝိုင်း အနီး ။ 📞 09-5047481 ♦️ အင်းစိန် 👉🏾 မိုးသောက်ပန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၆၁ ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန်ဈေးမှတ်တိုင် အနီး ။ 📞 09-790241610 ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ ရန်ကုန် - အင်းစိန်လမ်းမကြီး ။ 📞 09-5373099 ♦️ အလုံ 👉🏾 ဇဝန ဆေးဆိ်ုင် 👈🏾 ၃၅ မြေညီ ၊ ဝေဘာဂီလမ်း ၊ စာတိုက်မှတ်တိုင် ၊ 📞 09-965143415 ။ ♦️ အလုံ 👉🏾 ထိပ်တန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၇၉ , အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ။ 📞 01-210080 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 AA Pharmacy 👈🏾 ဆူးလေဘုရား အနီး ။ မီးသတ်ရုံးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 01-251451 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 SUPER STAR ဆေးဆိုင် 👈🏾 ကုန်ဈေးတန်းလမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းဒေါင့် ။ 📞 09-263137264 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 ဦးကျော်ခင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၅၈ ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့် , 📞 09-698669185 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 သင့်မြတ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၁၈ ၊ စည်ပင်လမ်း ၊ ၁၉ တောင်ဒဂုံ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-965194825 ။ ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 ရွှေစင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀၅၇ မောင်းမကန်လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံ တံတားထိပ် မှတ်တိုင် ။ 📞 09-971724105 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 အောင်စည်ဟိန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 မင်္ဂလာရာမလမ်း ၊မင်းကွန်း ဈေးနား ။ 📞 09-965193285 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 လှိုင်ဆေးဆိုင် 👈🏾 ပတ္တမြားလမ်း , ( 20 ) ကုန်တိုက်မှတ်တိုင် , အင်းဝဘဏ်အနီး , 📞 09-442339117 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 ဝင်းဆေးဆိုင် 👈🏾 ငါးပိငါးခြောက်တန်း , လေးထောင့်ကန်လမ်းမ , 📞 09-777747710 ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဗိုလ်စံ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၉၂ ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း ၊ ၅ ရပ်ကွက် ၊ 📞 01-577496 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဖြိုးမိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇၈ / ခ ၊ မေတ္တာလမ်း ၊ ၁၀ ရပ်ကွက် ၊ ၁၃ ဈေးရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-426133361 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မင်္ဂလာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၀၇ ၊ ရုံ ၁ ၊ နန္ဒဝန်ဈေး ။ 📞 09-73066657 ♦️ ဒေါပုံ 👉🏾 ပွင့်ကို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂ ၊ ယမုံနာ ဆိုင်ခန်း ၊ မြို့ နယ်တရားရုံး ရှေ့ ။ 📞 09-795318029 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ကိုတင်စိုး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အာသာဝတီလမ်း ၊ ၂ ရပ်ကွက် , ၂ဈေးအနီး ။ 📞 09-950644132 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဆုမြတ်ထက် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၃၆၈ မေဓာဝီ လမ်း ၊ စက္ကဝတ် လမ်းထိပ် ၊ ( ဈ ) ဈေး ။ 📞 09-43128619 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မြင့်စေတနာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇ ၊ ဝေဟင်လမ်း ၊ ဝေဘာဂီ ၄ ရပ်ကွက် ၊ အနန်းပင် ဈေးအနီး ၊ 📞 09-790196929 ။ ♦️ ရွှေပြည်သာ 👉🏾 ဇီဝက ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့ ။ 📞 09-785734302 🍄 မှော်ဘီ 🍁 နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဆတ်သွားတော ၊ မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ။ 📞 09-450013883 🍄 မှော်ဘီ 🍁 မိုးစတား ဆေးဆိုင် 🍁 ဆပ်သွားသောကျေးရွာ ၊ ညောင်နှစ်ပင်လမ်း ၊ မိန်းမလိုင်းမှတ်တိုင် ၊ 📞 09-796802405 🍄 ဒလ 🍁 အောင်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၁၁၈၅ ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်း ၊ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ၊ 📞 09-43050011 ။ ############################ Unicode 📣 ရန်ကုန်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 ♦️ မြောက်ဒဂုံ 👉🏾 နေလင်းဆေးဆိုင် 👈🏾 သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းနှင့်ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းထောင့် (32)ရပ်ကွက် , 📞 09-771104806 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ - ကိုသော်ဇင် (ကိုယ်စားလှယ်) 📞 ‭09-426093455‬ - ပိတောက်လမ်းမ ၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ ခြောက်ကွေ့မှတ်တိုင်အနီး ♦️ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် 👉🏾 မိုးနတ်သူဇာ ဆေးဆိုင် 👉🏾 ရွှေမင်္ဂလာဈေး, တတိယထပ် ဆိုင်အမှတ် (376) 📞 09-791729121 ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 သရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၆၁ (င) ၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင် အနီး ၊📞 09-5311334 ။ ♦️ စမ်းချောင်း 👉🏾 တိုကျို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၀ ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ 📞 01-510921 ။ ♦️လှိုင် 👉🏾 ရွှေသရဖူ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၃/၈၄ ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ဘူတာရုံလမ်း ၊ သုခ မှတ်တိုင် ၊ 📞 01-516438 ။ 💜 ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 🔈မင်္ဂလာဈေး ၊ ဆိုင်အမှတ် B 50-51 ၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး ဒုတိယထပ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ 📞 09-421007783 ။ 🔹 ကမာရွတ် 👉🏾 အိန်ဂျလာ Beauty Saloon 👈🏾 တိုက်အမှတ် ၁ ၊ အမှတ် ၁ ၊ အောင်မြင်သာစည် အိမ်ရာ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-792233119 ။ 🔹 စမ်းချောင်း 👉🏾 ခိုင်မာလာနှင်းဆီ Beauty Saloon 👈🏾 မင်းလမ်း , 📞 09-795740237 🔹 တာမွေ 👉🏾 Chit Tha Mee Pharmacy 👉🏾 အသောကမှတ်တိုင်, သူကြွယ်လမ်း , 📞 09 771227400 ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 ဆရာမ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၃ ၊ ထန်းတပင်လမ်း ၊ ဆရာမ ဆေးဆိုင် ၂ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင် ၊ 📞 09-771136091 ♦️ စမ်းချောင်း (မြေနီကုန်း) 👉🏾 မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 မြေနီကုန်း ပန်းခြံ ထဲ , 📞 09-5154931 ♦️ တာမွေ 👉🏾 ကိုဉာဏ် (Ko Nyan - General Services Co.Ltd) 👉🏾 အမှတ် ၅၄၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်လမ်း၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ဂီတအစည်းအရုံုး မျက်နှာချင်းဆိုင် ။ ♦️ ပန်းပဲတန်း 👉🏾 ချိုမေတ္တာ ဆေးခန်း နှင့် ဆေးမျိုးစုံ 👈🏾 ၂၉လမ်း အမှတ်-၆၉ ၊ အလယ်ဘလောက် ။ 📞 09-5108505 ♦️ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 👉🏾 ရှိုင်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၀၀၄ ၊ တိုက် ၁၁/၅လမ်း ၊ ယုဇန ဥယျာဉ် အိမ်ရာ ။ 📞 09-421078241 ♦️ ပန်းဘဲတန်း 👉🏾 စု မိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၂၉ လမ်း ၊ အောက်ဘလောက် ၊ ကုန်သည်လမ်းထိပ် ၊ လမ်း ၃၀ မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-250045436 ။ ♦️ ပုဇွန်တောင် 👉🏾 ရွှေပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၉၅ ၊ ရေကျော်လမ်း ၊ ပုဇွန်တောင်ဈေး မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-421025453 ။ ♦️ မင်္ဂလာဒုံ 👉🏾 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အောင်စေ ဘုရားလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက် ။ 📞 09-421168809 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 သီရိ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သမိုင်း လမ်းဆုံ ။ Hyundai Car Showroomနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 09-791444056 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာရိပ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀ မိုင်ကုန်း ၊ ဈေးတာဝန်ခံ ရုံးရှေ့။ 📞 09-253350272 ♦️ မရမ်းကုန်း 👉🏾 မေတ္တာဦး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၆ ၊ ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း ၊ ၃ ရပ်ကွက် ။ 📞 09-789789214 ♦️ ရန်ကင်း 👉🏾 စံဆေးဆိုင် 👈🏾 ဆရာစံလမ်း , ရွှေပုပ္ပါးဆေးခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 09-970083099 ♦️ရန်ကင်း 👉🏾 သစ္စာဦးဆေးဆိုင် 👈🏾 ကန်ဘဲ့ဘူတာဈေးလမ်း , မိုးကောင်းမှတ်တိုင် , 📞 09-790135608 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 SUPER ONE 👈🏾 ♦️ ရန်ကုန် 👉🏾 စိန်ဂေဟာ 👈🏾 ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ပွင့်သစ်ထွန်း (၃) ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မီးခွက်ဈေး ၊ အ.မ.က ၂၂ ကျောင်းရှေ့ ။ 📞 09-420024670 ♦️လှိုင်သာယာ 👉ရွှေမေတ္တာဆေးဆိုင် 👈 ပင်လုံဈေး , စစ်တွေလမ်း , 📞 09-420024670 ♦️ လှိုင်သာယာ 👉🏾 ရွှေရင်အေး ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၆၁၇ ခ ၊ အလောင်းဘုရားလမ်း ၊ ၁၉ ရပ်ကွက် ။ 📞 09-420024670 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 AAA ဆေးဆိုင် 👈🏾 Junction ဇဝန အနီး ။ 📞 01-573936 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း 👉🏾 လပြည့် ဆေးဆိုင် 👈🏾 စံပြ ၃ လမ်း ၊ စံပြဈေး အနီး ။ 📞 01-8551138 ♦️ သင်္ဃန်းကျွန်း (သုဝဏ္ဏ) 👉🏾 ဆွေမဟာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 ရေနသာလမ်း ၊ ရေနသာဈေးရှေ့ ၊ ၂၄ ရပ်ကွက် ၊ ရေစက်မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-5403809 ။ ♦️ သန်လျင် 👉🏾 ပစ်တိုင်းထောင် ဆေးနှင့်စတိုး 👈🏾 အမှတ် ၁၃ ၊ ရွှေသရက်လမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာမှတ်တိုင် ၊ 📞 09-428116002 ။ ♦️သန်လျင် 👉🏾 လေဆာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 သံလျင်ဈေး အပြင်ဘက်တန်း ၊ ORANGE ဘက် အခြမ်း ။ 📞 09-250347483 ♦️ သာကေတ 👉🏾 စိန်စီ ဆေး နှင့် စတိုး 👈🏾 3B ဧရာဝဏ် လမ်း ၊ သာကေတအဝိုင်း အနီး ။ 📞 09-5047481 ♦️ အင်းစိန် 👉🏾 မိုးသောက်ပန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၆၁ ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန်ဈေးမှတ်တိုင် အနီး ။ 📞 09-790241610 ♦️ကမာရွတ် 👉🏾 သိဒ္မိဝင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး ၊ ရန်ကုန် - အင်းစိန်လမ်းမကြီး ။ 📞 09-5373099 ♦️ အလုံ 👉🏾 ဇဝန ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၃၅ မြေညီ ၊ ဝေဘာဂီလမ်း ၊ စာတိုက်မှတ်တိုင် ၊ 📞 09-965143415 ။ ♦️ အလုံ 👉🏾 ထိပ်တန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၇၉ , အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ။ 📞 01-210080 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 AA Pharmacy 👈🏾 ဆူးလေဘုရား အနီး ။ မီးသတ်ရုံးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် , 📞 01-251451 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 SUPER STAR ဆေးဆိုင် 👈🏾 ကုန်ဈေးတန်းလမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းဒေါင့် ။ 📞 09-263137264 ♦️ ကျောက်တံတား 👉🏾 ဦးကျော်ခင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၅၈ ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့် , 📞 09-698669185 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 သင့်မြတ် ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၁၈ ၊ စည်ပင်လမ်း ၊ ၁၉ တောင်ဒဂုံ ၊ ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-965194825 ။ ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 ရွှေစင် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၁၀၅၇ မောင်းမကန်လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံ တံတားထိပ် မှတ်တိုင် ။ 📞 09-971724105 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 အောင်စည်ဟိန်း ဆေးဆိုင် 👈🏾 မင်္ဂလာရာမလမ်း ၊မင်းကွန်း ဈေးနား ။ 📞 09-965193285 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 လှိုင်ဆေးဆိုင် 👈🏾 ပတ္တမြားလမ်း , ( 20 ) ကုန်တိုက်မှတ်တိုင် , အင်းဝဘဏ်အနီး , 📞 09-442339117 ♦️ တောင်ဒဂုံ 👉🏾 ဝင်းဆေးဆိုင် 👈🏾 ငါးပိငါးခြောက်တန်း , လေးထောင့်ကန်လမ်းမ , 📞 09-777747710 ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဗိုလ်စံ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၅၉၂ ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း ၊ ၅ ရပ်ကွက် ၊ 📞 01-577496 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဖြိုးမိသားစု ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇၈ / ခ ၊ မေတ္တာလမ်း ၊ ၁၀ ရပ်ကွက် ၊ ၁၃ ဈေးရှေ့မှတ်တိုင်အနီး ၊ 📞 09-426133361 ။ ♦️ တောင်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မင်္ဂလာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၁၀၇ ၊ ရုံ ၁ ၊ နန္ဒဝန်ဈေး ။ 📞 09-73066657 ♦️ ဒေါပုံ 👉🏾 ပွင့်ကို ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၂ ၊ ယမုံနာ ဆိုင်ခန်း ၊ မြို့နယ်တရားရုံး ရှေ့ ။ 📞 09-795318029 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ကိုတင်စိုး ဆေးဆိုင် 👈🏾 အာသာဝတီလမ်း ၊ ၂ ရပ်ကွက် , ၂ဈေးအနီး ။ 📞 09-950644132 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 ဆုမြတ်ထက် ဆေးဆိုင် 👈🏾 ၃၆၈ မေဓာဝီ လမ်း ၊ စက္ကဝတ် လမ်းထိပ် ၊ ( ဈ ) ဈေး ။ 📞 09-43128619 ♦️ မြောက်ဥက္ကလာပ 👉🏾 မြင့်စေတနာ ဆေးဆိုင် 👈🏾 အမှတ် ၈၇ ၊ ဝေဟင်လမ်း ၊ ဝေဘာဂီ ၄ ရပ်ကွက် ၊ အနန်းပင် ဈေးအနီး ၊ 📞 09-790196929 ။ ♦️ ရွှေပြည်သာ 👉🏾 ဇီဝက ဆေးဆိုင် 👈🏾 ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့ ။ 📞 09-785734302 🍄 မှော်ဘီ 🍁 နွေမိုးဆောင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဆတ်သွားတော ၊ မိန်းမလိုင်း မှတ်တိုင် ။ 📞 09-450013883 🍄 မှော်ဘီ 🍁 မိုးစတား ဆေးဆိုင် 🍁 ဆပ်သွားသောကျေးရွာ ၊ ညောင်နှစ်ပင်လမ်း ၊ မိန်းမလိုင်းမှတ်တိုင် ၊ 📞 09-796802405 🍄 ဒလ 🍁 အောင်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၁၁၈၅ ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်း ၊ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက် ၊ 📞 09-43050011 ။ ----------------------+++++++------------------------- Zawgyi မန္တလေး မြို့နယ်အတွင်း ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ 🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 SKY LARK Shop ( ပင်ရင်း ) 💧 ၁၉-၂၀ကြား , အမှတ် ၁၁ ကျောင်းတံတိုင်းတောင်ဘက်ဝန်းအဆုံး 🎈 ၁၄ လမ်း 💧 စိန်သန်းကြွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 📞 09-444014320 🎈 ၁၅ လမ်း 💧 ဆုမြတ်သူ ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်းထောင့် ။ 📞 09-454077131 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ - ၈၇ ကြား ။ 📞 09-43165790 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဂြိုလ်တု ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 📞 09-797371231 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 နေမျိုး (၁) ဆေးဆိုင် 💧 ဘောလုံးကွင်းဘေး ၊ နန်းရှေ့ ။ 📞 09-43058943 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 အောင်မေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံရှေ့ ။ 📞 09-91034056 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 G - One 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ၊ 02 2844107 ။ 📞 02-2844107 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 စန္ဒီ ဆေးဆိုင် 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ။ 📞 02-4071914 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 အားမာန်သစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၉ - ၉၀ ကြား ။ 📞 09-2016284 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကိုဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇၅ - ၇၆ ကြား ၊ 📞 09-33109535 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကောင်းသန့် မြန်မာဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ - ၈၄ ကြား , 📞 09-783000277 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 09 963188928 ။ 📞 09-963188928 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 စိန်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ။ 📞 09-257271563 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးဆိုင် 💧 ၇၄ - ၇၅ ကြား ။ 📞 09-962011701 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 Pwint Pwint ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ၊ 📞 09-91009677 ။ 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 သီတာနွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၂ - ၈၃ ကြား ။ 📞 09-259005656 🎈 ၃၂ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ x ၈၄ ကြား ။ 📞 09963188328 🎈 ၃၅ လမ်း 💧 KL ဆေးဆိုင် 💧 ၇၃ - ၇၄ ကြား ။ 📞 09-777801788 🎈 ၃၇ လမ်း 💧 စွမ်းထက်အောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၆ ထောင့် ၊ 📞 09-977250739 ။ 🎈 ၃၈ လမ်း 💧 ဇွဲသစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်း ဒေါင့် ။ 📞 09-2018587 🎈 ၄၁ လမ်း 💧 စိန်တိုက် ဆေးဆိုင် 💧၄၁ လမ်းအောက်၊ မိုးကောင်းကျောင်းတောင်ဘက် ။📞 09-91020335 🎈 ၅၅ လမ်း 💧 အောင်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 📞 09-91012456 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 San Phyo ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 📞 09-972776598 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်း ဆေးဆိုင် 💧 📞 02-5154737 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ နှင့် ခိုင်ရွှေဝါ ကြား ၊ 📞 09-793031955 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 နေမျိုး ဆေးဆိုင် 💧 ၃၅ လမ်းထောင့် ၊ 📞 09-257800620 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ။ 📞 09-2039964 🎈 ၆၂ လမ်း 💧 လေပြေ ဆေးဆိုင် 💧 သဇင် နှင့် ငုဝါ လမ်းကြား ၊ ကုတင် 300 ရှေ့ ။ 📞 09-779551165 🎈 ၆၄ စံပြလမ်း 💧 အောင်သရဖူ ဆေးဆိုင်💧 စက်မှု ၊ 📞 02-5153031 ။ 🎈 ၆၅ လမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ဒေလီယာ လမ်းထောင့် ၊ 📞 09-963699799 ။ 🎈 ၆၆ - ၆၅ ကြား 💧 နေလ ဆေးဆိုင် ၁ 💧 မနော်ဟရီ ။ 📞 09-5175944 🎈 ၇၅ လမ်း 💧 ဦးဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၂၇ - ၂၈ ကြား ။ 📞 09-773333710 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 မင်းထက် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၈ ကြား ၊ စည်သာလမ်း ။ 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 ရာပြည့်ကျော် ဆေးဆိုင် 💧 ၁၀ - ၁၁ ကြား ၊ အနောက်ပြင် ။ 📞 09-977932182 🎈 ၇၈ လမ်း 💧 မြင့်မြတ်မောင် ဆေးဆိုင် 💧 ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ၊ တံခွန်တိုင် အဝိုင်းမြောက်ဘက် ၊ 📞 09-258888991 🎈 ၈၁ လမ်း 💧 ရွှေဒေါင်း ဆေးဆိုင် 💧 ၃၉ - ၄၀ ကြား , 📞 09-790132551 🎈 ၈၆ လမ်း 💧 ဝင်းအောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၄၁ x ၄၂ ကြား ၊ စိန်ပန်း ၊ 📞 09-777831163 ။ 🎈 ကျန်စစ်သားလမ်း 💧 ရှိုင်းနောင်နောင် ဆေးနှင့် ကုန်စုံဆိုင် 💧 ၆၈ - ၆၉ ကြား ၊ ပြည်ကြီး တခွန် ၁ ရပ်ကွက် , 📞 09798661805 🎈 ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းအရှေ့ 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 📞 09-787382456 ။ 🎈 စက်မှု စံပြလမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ၆၂ - ၆၃ ကြား ။ 📞 09-402557771 🎈 စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း 💧 ဒေါ်လာ ဆေးဆိုင် 💧 ကန်တော်ကြီး လမ်းခွဲ မြောက်ဘက်၊ ရွှေကံ့ကော်မွေ့ယာဆိုင်ရှေ့ , 📞 09-797385334 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 ပါရမီ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ 📞 09-43015322 ။ 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 အောင်ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ အက်ဒီသင်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မြောက်ဘက် 📞 09-790130803 🎈 တိုက်တန်း 💧 ငြိမ်းချမ်း ဆေးဆိုင် 💧 အမှတ် ၂၃ ၊ ဘူတာ ၊ 📞 09-798935379 ။ 🎈 မတ္တရာ လမ်း 💧 Life ဆေးဆိုင် 💧 ဂေါက်ကွင်း မြောက်ဘက် ။ 📞 02-4072331 🎈 မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းမ 💧 ပြည်ကျော်ကြား ဆေးဆိုင် 💧 လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် နှင့်တွဲလျက် ၊ အုန်းချော , 📞 09-2216489 🎈 အမရပူရ 💧 မိုးမခ ဆေးဆိုင် 💧 📞 09-963238000 ။ 🎈 ဈေးချို 💧 Thabarwa 💧 📞 09-91035690 ။ ########################## Unicode မန္တလေး မြို့နယ်အတွင်း ရရှိနိုင်သော ဆေးဆိုင်များ 🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 SKY LARK Shop ( ပင်ရင်း ) 💧 ၁၉-၂၀ကြား , အမှတ် ၁၁ ကျောင်းတံတိုင်းတောင်ဘက်ဝန်းအဆုံး 🎈 ၁၄ လမ်း 💧 စိန်သန်းကြွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 📞 09-444014320 🎈 ၁၅ လမ်း 💧 ဆုမြတ်သူ ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်းထောင့် ။ 📞 09-454077131 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဆုမြတ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ - ၈၇ ကြား ။ 📞 09-43165790 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 ဂြိုလ်တု ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ။ 📞 09-797371231 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 နေမျိုး (၁) ဆေးဆိုင် 💧 ဘောလုံးကွင်းဘေး ၊ နန်းရှေ့ ။ 📞 09-43058943 🎈 ၁၉ လမ်း 💧 အောင်မေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မုန်တိုင်း ဓမ္မာရုံရှေ့ ။ 📞 09-91034056 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 G - One 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ၊ 02 2844107 ။ 📞 02-2844107 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 စန္ဒီ ဆေးဆိုင် 💧 ၆၄ - ၆၅ ကြား ။ 📞 02-4071914 🎈 ၂၆ လမ်း 💧 အားမာန်သစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၉ - ၉၀ ကြား ။ 📞 09-2016284 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကိုဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇၅ - ၇၆ ကြား ၊ 📞 09-33109535 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 ကောင်းသန့် မြန်မာဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ - ၈၄ ကြား , 📞 09-783000277 🎈 ၂၉ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 09 963188928 ။ 📞 09-963188928 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 စိန်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 ဆေးရုံကြီး ရှေ့ ။ 📞 09-257271563 🎈 ၃၀ လမ်း 💧 မြင့်မိုရ်ဦး ဆေးဆိုင် 💧 ၇၄ - ၇၅ ကြား ။ 📞 09-962011701 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 Pwint Pwint ဆေးဆိုင် 💧 ၈၁ - ၈၂ ကြား ၊ 📞 09-91009677 ။ 🎈 ၃၁ လမ်း 💧 သီတာနွယ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၂ - ၈၃ ကြား ။ 📞 09-259005656 🎈 ၃၂ လမ်း 💧 အေးကိုအေးချို ဆေးဆိုင် 💧 ၈၃ x ၈၄ ကြား ။ 📞 09963188328 🎈 ၃၅ လမ်း 💧 KL ဆေးဆိုင် 💧 ၇၃ - ၇၄ ကြား ။ 📞 09-777801788 🎈 ၃၇ လမ်း 💧 စွမ်းထက်အောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၆ ထောင့် ၊ 📞 09-977250739 ။ 🎈 ၃၈ လမ်း 💧 ဇွဲသစ် ဆေးဆိုင် 💧 ၈၆ လမ်း ဒေါင့် ။ 📞 09-2018587 🎈 ၄၁ လမ်း 💧 စိန်တိုက် ဆေးဆိုင် 💧၄၁ လမ်းအောက်၊ မိုးကောင်းကျောင်းတောင်ဘက် ။📞 09-91020335 🎈 ၅၅ လမ်း 💧 အောင်မြင့်မိုရ် ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 📞 09-91012456 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 San Phyo ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ၊ 📞 09-972776598 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်း ဆေးဆိုင် 💧 📞 02-5154737 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ နှင့် ခိုင်ရွှေဝါ ကြား ၊ 📞 09-793031955 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 နေမျိုး ဆေးဆိုင် 💧 ၃၅ လမ်းထောင့် ၊ 📞 09-257800620 ။ 🎈 ၅၈ လမ်း 💧 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 💧 မနော်ဟရီ တောင်ဘက် ။ 📞 09-2039964 🎈 ၆၂ လမ်း 💧 လေပြေ ဆေးဆိုင် 💧 သဇင် နှင့် ငုဝါ လမ်းကြား ၊ ကုတင် 300 ရှေ့ ။ 📞 09-779551165 🎈 ၆၄ စံပြလမ်း 💧 အောင်သရဖူ ဆေးဆိုင်💧 စက်မှု ၊ 📞 02-5153031 ။ 🎈 ၆၅ လမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ဒေလီယာ လမ်းထောင့် ၊ 📞 09-963699799 ။ 🎈 ၆၆ - ၆၅ ကြား 💧 နေလ ဆေးဆိုင် ၁ 💧 မနော်ဟရီ ။ 📞 09-5175944 🎈 ၇၅ လမ်း 💧 ဦးဟန်တင် ဆေးဆိုင် 💧 ၂၇ - ၂၈ ကြား ။ 📞 09-773333710 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 မင်းထက် ဆေးဆိုင် 💧 ၇ - ၈ ကြား ၊ စည်သာလမ်း ။ 🎈 ၇၆ လမ်း 💧 ရာပြည့်ကျော် ဆေးဆိုင် 💧 ၁၀ - ၁၁ ကြား ၊ အနောက်ပြင် ။ 📞 09-977932182 🎈 ၇၈ လမ်း 💧 မြင့်မြတ်မောင် ဆေးဆိုင် 💧 ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ၊ တံခွန်တိုင် အဝိုင်းမြောက်ဘက် ၊ 📞 09-258888991 🎈 ၈၁ လမ်း 💧 ရွှေဒေါင်း ဆေးဆိုင် 💧 ၃၉ - ၄၀ ကြား , 📞 09-790132551 🎈 ၈၆ လမ်း 💧 ဝင်းအောင် ဆေးဆိုင် 💧 ၄၁ x ၄၂ ကြား ၊ စိန်ပန်း ၊ 📞 09-777831163 ။ 🎈 ကျန်စစ်သားလမ်း 💧 ရှိုင်းနောင်နောင် ဆေးနှင့် ကုန်စုံဆိုင် 💧 ၆၈ - ၆၉ ကြား ၊ ပြည်ကြီး တခွန် ၁ ရပ်ကွက် , 📞 09798661805 🎈 ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းအရှေ့ 💧 မင်းထက်သာ ဆေးဆိုင် 💧 📞 09-787382456 ။ 🎈 စက်မှု စံပြလမ်း 💧 စိမ်းလန်း ဆေးဆိုင် 💧 ၆၂ - ၆၃ ကြား ။ 📞 09-402557771 🎈 စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း 💧 ဒေါ်လာ ဆေးဆိုင် 💧 ကန်တော်ကြီး လမ်းခွဲ မြောက်ဘက်၊ ရွှေကံ့ကော်မွေ့ယာဆိုင်ရှေ့ , 📞 09-797385334 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 ပါရမီ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ 📞 09-43015322 ။ 🎈 စစ်ကိုင်း မန္တလေးလမ်း 💧 အောင်ပြည့်စုံ ဆေးဆိုင် 💧 အမရပူရ ၊ အက်ဒီသင်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မြောက်ဘက် 📞 09-790130803 🎈 တိုက်တန်း 💧 ငြိမ်းချမ်း ဆေးဆိုင် 💧 အမှတ် ၂၃ ၊ ဘူတာ ၊ 📞 09-798935379 ။ 🎈 မတ္တရာ လမ်း 💧 Life ဆေးဆိုင် 💧 ဂေါက်ကွင်း မြောက်ဘက် ။ 📞 02-4072331 🎈 မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းမ 💧 ပြည်ကျော်ကြား ဆေးဆိုင် 💧 လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် နှင့်တွဲလျက် ၊ အုန်းချော , 📞 09-2216489 🎈 အမရပူရ 💧 မိုးမခ ဆေးဆိုင် 💧 📞 09-963238000 ။ 🎈 ဈေးချို 💧 Thabarwa 💧 📞 09-91035690 ။ ---------------------------++++++------------------------- Zawgyi အခြားရရှိနိုင်သော မြို့ များ ♦️♦️Other Townships 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုစိုးမိုးနိုင် 🍁 ပုသိမ်မြို့ 📞 09-691432688 🍄 ပဲခူး 🍁 ဌေးလွင် ဆေးစတိုး နာရီစင်ပန်းခြံရှေ့ ။ ၂၈ လမ်း 📞 09-5351625 🍄 ပဲခူး 🍁 ကျော်ကြားဝေ ( ရှန်တီး ) ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (541) , သနပ်ပင်လမ်း , လိပ်ပြာကန်ရပ်ကွက် 📞 09-790154650 ။ 🍄 တိုက်ကြီး 🍁 ကိုဂျန်းဆေးဆိုင် 🍁 မြို့လယ်လမ်း အ​ဆောင်​ -(2)အခန်း(4.5) ၊ 📞 09-970957330 🍄 ဥက္ကံ 🍁 Lwin(2)ကိုရင်​​ထွေးဆေးဆိုင် 🍁 ​ဈေးပတ်​လမ်း ၊ 📞 09-420247364 🍄 သုံးဆယ် 🍁 ကိုလူထွန်း ​ဆေးဆိုင်​ 🍁 ပြည်လမ်း ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၊ 📞 09-5366644 🍄 သာယာဝတီ 🍁 တို့ညီ​နောင်​ ​ဆေးဆိုင်​ 🍁 ​ဈေးလမ်း 📞 09-790164478 🍄 လက်ပံတန်းမြို့ 🍁 ဒီလှိုင်း ​ဆေးဆိုင်​ 🍁 လမ်းမ ​တော်​​ဈေး ( ၁)လမ်း 📞 053-32498 🍄 ပြည် 🍁 တက်နေလင်းဆေးဆိုင်🍁 📞 095311961 🍄 ပြည် 🍁 သုခကမ္ဘာဆေးဆိုင် 🍁 (3) လမ်းထိပ် , ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး , 📞 053-28241 🍄 ဒိုက်ဦး 🍁 သုခစံဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(41), မင်းလမ်း ဒရယ်မီးရပ်ကွက် ဒိုက်ဦးမြို့ 📞 09-258940156 🍄 ဖြူး 🍁 ကိုမိုးသီး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (3) , (12) ဈေး , အရှေ့ဘက်တန်း ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း 📞 09-428199136 🍄 တောင်ငူ 🍁 တက်နေခြည်ဆေးဆိုင်🍁 ဈေးလမ်း ၁လမ်းနှင့်ကုန်သည်ကြီးလမ်းကြား🍁 📞09 5352206 ၊ 09 797951343 ။ 🍄 အောင်လံမြို့ 🍁 ​ရွှေပြည်​စိုး(2) ဆေးဆိုင် လမ်းမ​တော်​ (၁)လမ်း 📞 09-452399998 🍄 တောင်တွင်းကြီးမြို့🍁 ကိုသိန်းထွန်း ​ဆေးဆိုင် ​🍁 ပြည်​လမ်း 📞 09-973500100 🍄 မကွေး 🍁 တူးတူး ဆေးဆိုင် 🍁 တိုင်းဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် ၊ 📞 09-401556740 ။ 🍄 မကွေး 🍁 အာရောဂျံ ဆေးဆိုင် 🍁 ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှေ့ ။ 📞 09-967956464 🍄 မကွေး 🍁 နိုင်လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ရန်ပယ်ဈေး ၊ အပြင်ဘက်(၂)ထပ်တိုက်တန်း ။ 📞 09-450981868 🍄 ပန်းတနော် 🍁 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 🍁 ဆိုင်ခန်း အမှတ် (1)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ 📞 04630414 ။ 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုစိုးမိုးနိုင် 🍁 ပုသိမ်မြို့ 📞 09-691432688 🍄 ပုသိမ် 🍁 ပါဝါ ဆေးဆိုင် 🍁 E -53 ၊ ကင်မလင်းကျွန်းလမ်းမကြီး 📞 09-422496695 ။ 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုသူ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (60)၊ ရှင်ပင်ဖုန်းပွင့်လမ်း ၊ မြို့သစ်ဈေးရှေ့ 📞 09-5202099 ။ 🍄 ဟသာင်္တ 🍁 ကိုကြည်ဝင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(၂) တိုင်းရင်းဆေးခန်း ။ ပဒေသာ ဈေးကြီး ရှေ့။ မန်းဘခိုင် လမ်း ။ 📞 09-771126372 🍄 ကွမ်းခြံကုန်း 🍁ရာပြည့် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (91) ၊ သုံးပန်လှလမ်း ၊ ဈေးပိုင်း ၊ 📞 09-790138153 ။ 🍄 လပွတ္တာ 🍁 ဦးပေါ်လွင် အပ်ချူပ်ဆိုင် 🍁 ဆိုင်အမှတ် (20)၊ ဘုရားလမ်း ၊ မြို့မဈေးထိပ် 📞 09-252185212 ။ 🍄 မအူပင် 🍁 စောဒေ၀ီ ဆေးဆိုင် 🍁 ဘုရားလမ်း နှင့် တေဇလမ်းထောင့် ၊ 📞 09-5198025 ။ 🍄 ဘိုကလေး 🍁 နေ၀င်းမောင် ဆေးဆိုင် 🍁 (12/13) ဧရာဝတီ (သင်္ဘောဆိပ်လမ်း) 📞 09-429759035 ။ 🍄 ဖျာပုံ 🍁 ထာဝရ ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးရှေ့ ၊ 📞 045- 41176 ။ 🍄 တွံတေး 🍁 ဦးဝေယား ဆေးဆိ်ုင် 🍁 အမှတ် ၂၆ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ 📞 09-420072552 ။ 🍄 သထုံ 🍁 ဒေါ်ညို ဆေးဆိုင် 🍁 📞 057 - 40370 , 09-975457972 ။ 09459551166 အလယ်တန်းလမ်း ၊ အောက်ကြေးရပ်ကွက် ။ 🍄 ဘားအံ 🍁 လန်းဆန်း ဆေးဆိုင် 🍁 ပိတောက်လမ်း , ဇီးတောရပ်ကွက် 📞 09-8731397 🍄 မော်လမြိုင် 🍁 ဦးမောင်ထူး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (11) , မြို့မတံတားလမ်း 📞 057-25966 , 057-25960 , 09-5320921 ။ မော်လမြိုင်မြို့🏠အိမ်အရောက်ပို့ မှာယူလိုပါက 👇👇 💰ဝန်ဆောင်ခ - 2000 ကျပ် ☎️ ဖုန်းနံပတ် - 09 256070900 | 09 424870011 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ​နေခြည်​သစ်​ ​ဆေးဆိုင်​ 💰 ၃ ထပ်​အ​ဆောင်၊​ ဒိုင်​ဝန်း​ဈေး​ 📞 09 259660585 🌼 မော်လမြိုင် 💰 မိုးနတ်​သား ​ဆေးဆိုင်​ 💰 ​ရွှေမြိုင်​သီရိ​ဈေးအ​ရှေ့ 📞 09 255894244 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဖိုးလပြည့်​​ ​ဆေးဆိုင်​ 💰 သမိန်​ဘရမ်းလမ်း ၊ မြိုင်​သာယာ​ဈေး 📞 09 255841646 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဦစံရင်​ ​ဆေးဆိုင်​ 💰 ​အောက်​လမ်းမကြီး၊ ​ဈေးကြီးဖက်တန်း 📞 09 255739116 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ​ဆေးဝင်္ကဘာ ​ဆေးဆိုင်​ 💰 ​ဈေးချို ၊ ငန်​​သေးလမ်း 📞 09 777605982 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ကိုမျိုး ​ဆေးဆိုင်​ 💰 ​ဇေယျာ ၁၊ လမ်းမကြီး 📞 09 443595509 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဇာနည်​လျှမ်း ​ဆေးဆိုင်​ 💰 သိရီမြိုင်​ ၈ လမ်းထိပ်​​ 📞 09 450452724 🍄 မုဒုံ 🍁 မွန်ဦး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (118) , မော်လမြိုင်-သိမ်ဖြူဇရပ် လမ်းမကြီး 📞 09-425261467 ။ 🍄 မြိတ် 🍁 Wai Thinzar Lwin🍁 ဦးသန်းလွင် ၊ အမှတ် ၂၂၅ ၊ (၅) လမ်း ၊ နောက်လယ်ရပ် ၊ 📞 09 -776097948 ။ 🍄 ထားဝယ် 🍁 အောင် ဆေးခန်း 🍁 အမှတ် (65) , အာဇာနည်လမ်း , ရှမ်းမလည်ဆွဲရပ်ကွက် 📞 09-25083321 , 09-458233951 🍄 ကော့သောင်း 🍁 စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (68) , ဗိုလ်ချုပ်လမ်း 📞 059-51838 ။ 🍄 မြဝတီ 🍁 ရွှေမန္တလေး ဆေးဆိုင် 🍁 မေတ္တာလမ်း ၊ ဘူရင့်နောင်ဈေးဘေး 📞 09 791611963 🍄 မြင်းခြံ 🍁 ကြယ်နီဆေးဆိုင် 🍁 ကိုးဆောင်တိုက်တန်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ ၊ 📞 066-21759 🍄 ညောင်ဦး 🍁 သရဖူဆေးဆိုင် (2)🍁 လမ်းမတော် , အောင်သိဒ္ဓိရပ်ကွက် 📞 09-458302768 🍄 ပျော်ဘွယ် 🍁 ထွန်းသီရိဆေးဆိုင် 🍁 အနော်ရထာလမ်း , ကျောက်တိုင်တွင်းတောင်ဘက် 📞 09-402551802 🍄 သာစည် 🍁 စိန်သရဖူဆေးဆိုင် 🍁 လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအနီး 📞 09-420318097 🍄ဇီးကုန်း 🍁 ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် 🍁 ထန်းတပင် ၊ 📞 09-402595354 ။ 🍄 တပ်ကုန်း 🍁 ကိုမျိုးသူအောင် 🍁 📞 09-440099412 ။ 🍄 နေပြည်တော် 🍁 က္ကုစာသာယ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေး ။ 📞 09-422467228 🍄 ပလိပ် 🍁 ကောင်းဆု ဆေးဆိုင် 🍁 ပလိပ် ကားဆိပ်နှင့် သံလမ်းဆုံ အနီး ။ 📞 09-760153914 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 ပွဲကတော် ဆေးဆိုင် 🍁 မင်္ဂလာရပ် 📞 067-22658 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 လေလှိုင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်လက်ယာလမ်း , ပျဉ်းမနားဈေးအရှေ့ဘက် 📞 09-8300424 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား (ဆရာဦးကျော်စိုး ( တဆ-၆၁၃ ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အငြိမ်းစား) 🍁 မိဘရိပ် တိုင်းရင်းဆေးခန်း 🍁 (အကြောအဆစ်နှင့်အထွေထွေရောဂါကု) အမှတ် ၅/၆၂(၁)၊ သံတိုင် ၃ လမ်း ၊ ရွှေတောင်ကြီးစားသောက်ဆိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ ယောက်သွားအင်းရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား၊ နေပြည်တော်။ 📞 09-448537598 🍄 ပခုက္ကူ 🍁ဦးစိုးလွင် 🍁 အမှတ် (11) , ရွှေလမ်း 12-13ကြား 📞 09-43206401 ။ 🍄 မြိုင်မြို့ 🍁 ဆုလာဘ် ဆေးဆိုင်🍁 အမှတ် (3), ဗဟင်းလမ်းဘေး 📞 09-772592526 ။ 🍄 မိတ္ထီလာ 🍁 မဟာဆွေ ဆေးဆိုင် 🍁 အရှေ့ပြင်အရပ် ၊ ဒုတိယလမ်းမတော် ၊ ရေစဉ်ကြီးအနီး ၊ 📞 09-777434084 ။ 🍄 နွားထိုးကြီး 🍁 ကိုကျော်ဇင် ဆေးဆိုင် 🍁 📞09 420704527 KBZ ဘဏ်အနောက် 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 SB ဆေးဆိုင် 🍁 ပါရမီ မလိုင်မုန့်ဆိုင် ဘေးလမ်းကြားထဲ ။ 📞 09-691158714 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 ဖိုးလမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် ဒေါင့် ၊ 📞 09-444042715 ။ 🍄 ကလေး 🍁ထွန်းဆေးဆိုင်🍁 တံတားဦး ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အနီး , 📞 09-420781165 ။ 🍄 ကျိုင်းတုံ 🍁ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (10) , ကြိမ်းလန်း (3) လမ်း 📞 09-5250497 ။ 🍄 ချင်းရွှေဟော (လောက်ကိုင် အနီး) 🍁 နှင်းဧကရီ ဆေးဆိုင် 🍁 လောက်ကိုင်လမ်းဆုံ 📞 09 259665821 ၊ 09 256034838 ။ 🍄 တာချီလိတ် 🍁 BBB ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး , မဂါဘို , ခမ်းရပ်ကွက် 📞 09-428351135 ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း🍁 📞 09-456807704 ၊ 086-21073 ( ဖုန်းဆက်ပြီး သွားဝယ်ပါရန် ) ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၁)🍁 ရုပ်ရှင်ရုံ အနီး မြို့ မရပ် ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၂) 🍁 ပိတ်စွယ် ညောင်ပင်ဈေး အနီး 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူးဆေးဆိုင် (၃) 🍁 ဆေးရုံ ရှေ့🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကောင်းသန့်ဆေးဆိုင် 🍁 ရွှေဘုံသာလမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာ ဈေးရှေ့ ### မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်း ( ကြပ်ပြင် ) ### - 🍁သိန်းသန်း ဆေးဆိုင် 🍁 မီးသတ်အနီး ပန်းမ -🍁 မေတ္တာမွန် ဆေးဆိုင်🍁 ကြပ်ပြင်ဈေး 09 49352335 🍄 တောင်ကြီး 🍁 ဇွန် ဆေးဆိုင် 🍁 အေးသာယာ GTI သွားသည့် လမ်းမပေါ် GTI မရောက်ခင် 🍄 တောင်ကြီး 🍁 မြတ်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ။ 📞 09-254176229 🍄 တောင်ကြီး 🍁 လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး ။ 📞 09-41003058 🍄 တောင်ကြီး 🍁 တော်ဝင် ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး 🍄 လားရှိုး 🍁 ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 မကြည်ပြာသိန်း 📞 09-36033309 , 09-788273496 🍄 လားရှိုးမြို့​ 🍁 အောင်​​ ​ဆေးဆိုင်​ 🍁 ​ရေးစဉ်​အ​ရှေ့​ရွှေကံ့​ကော်​​ဈေးရုံ 📞 09-403750084 🍄 လားရှိုးမြို့ 🍁 စေတနာ ဆေးဆိုင် 🍁 ရပ်ကွက် ၁/ နယ်မြေ ၇/ လ၀ကရုံးလမ်း 📞 09-969557758 🍄 မူဆယ်မြို့ 🍁 ​ကောင်းဆက်​ ​ဆေးဆိုင်​ 🍁 အမှတ်(1) ​ဈေးကြီ​တောင်​ဘက်​ ဗိုလ်​တည်းလမ်း 📞 09-78523104 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁ကိုဖြိုး ( ကိုယ်စားလှယ် )🍁 📞 09-400998996 ။ 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁 နောင်ဘိုအောင် 🍁 ( ရွှေပြည်အေးမြို့ ၊ နောင်ဘိုအောင် ၊ နမ့်တော့ မှာလည်း ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါသည် ) 🍄 အောင်ပန်း 🍁 စုမြတ် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(113), သိဒ္ဓိယလမ်း ၃ရပ်ကွက် 📞 09 73501633 ။ 🍄 လွိုင်ကော် 🍁 မန္တလေး ပင်ရင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (21) , မင်းစီးရပ်ကွက် 📞 09-41007968 ။ 🍄 မုံရွာ 🍁 ကုမုဒြာ ဆေးဆိုင် 🍁 ကျောက်ကာလမ်း ၊ မီးသတ် တိုက်တန်း ။ 📞 09-400413766 🍄 မုံရွာ 🍁 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 🍁 ပွဲစားတန်းလမ်း 📞 071-24245 ။ 🍄 စစ်ကိုင်း 🍁ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးလမ်း နှင့် ချင်းစုကျောင်းထောင့် 📞 09-964040129 🍄 ရွှေဘို 🍁 ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် 🍁 📞 075 21118 , 09 259142367 ။ ရွှေသိမ်တော်ဘုရားလမ်း 🍄 မိုးကောင်း 🍁 ကိုကျော်ကျော် ဆေးဆိုင် 🍁 ဘူတာအနီး 📞 09-400031885 🍄 ဗန်းမော် 🍁ထွန်းမြန်မာ ဆေးဆိုင် 🍁 အလယ်ရပ်ကုန်းဆင်း , KBZ Bank (2) ရှေ့ 📞 074 - 51285 ။ 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 မြတ်မွန် ဆေးဆိုင် 🍁 ဝင်းသူဇာရှေ့ ၊ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး ။ 📞 09-43021786 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ရှိန် ဆေးဆိုင် 🍁 ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် ။ 📞 09-43021786 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ဦးသန်းနိုင် 🍁 ခေမာသီရိရပ်ကွက် 📞 09 43021786 ။ 🍄ဘူးသီးတောင် 🍁 ရှုမဝ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးရှေ့ 📞 09-421751451 🍄 မောင်းတော 🍁 ARF -4ဆေးဆိုင် 🍁 📞 09-49658034 ။ 🍄 စစ်တွေ 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 📞 09-421744844 ၊ 09-36124601 ၊ 09-250149102 ၊ 09-421745043 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁ဇဗ္ဗူထွန်းဆေးဆိုင်🍁 မင်းပြားဈေးထဲ 📞 09-421714901 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁 ထွန်းဆေးဆိုင် 🍁 မင်းပြားဈေးရှေ့ 📞 09-421721438 ။ ######################### Unicode အခြားရရှိနိုင်သော မြို့များ ♦️♦️Other Townships 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုစိုးမိုးနိုင် 🍁 ပုသိမ်မြို့ 📞 09-691432688 🍄 ပဲခူး 🍁 ဌေးလွင် ဆေးစတိုး နာရီစင်ပန်းခြံရှေ့။ ၂၈ လမ်း 📞 09-5351625 🍄 ပဲခူး 🍁 ကျော်ကြားဝေ ( ရှန်တီး ) ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (541) , သနပ်ပင်လမ်း , လိပ်ပြာကန်ရပ်ကွက် 📞 09-790154650 ။ 🍄 တိုက်ကြီး 🍁 ကိုဂျန်းဆေးဆိုင် 🍁 မြို့လယ်လမ်း အဆောင် -(2)အခန်း(4.5) ၊ 📞 09-970957330 🍄 ဥက္ကံ 🍁 Lwin(2)ကိုရင်ထွေးဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးပတ်လမ်း ၊ 📞 09-420247364 🍄 သုံးဆယ် 🍁 ကိုလူထွန်း ဆေးဆိုင် 🍁 ပြည်လမ်း ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၊ 📞 09-5366644 🍄 သာယာဝတီ 🍁 တို့ညီနောင် ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးလမ်း 📞 09-790164478 🍄 လက်ပံတန်းမြို့ 🍁 ဒီလှိုင်း ဆေးဆိုင် 🍁 လမ်းမ တော်ဈေး ( ၁)လမ်း 📞 053-32498 🍄 ပြည် 🍁 တက်နေလင်းဆေးဆိုင်🍁 📞 095311961 🍄 ပြည် 🍁 သုခကမ္ဘာဆေးဆိုင် 🍁 (3) လမ်းထိပ် , ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး , 📞 053-28241 🍄 ဒိုက်ဦး 🍁 သုခစံဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(41), မင်းလမ်း ဒရယ်မီးရပ်ကွက် ဒိုက်ဦးမြို့ 📞 09-258940156 🍄 ဖြူး 🍁 ကိုမိုးသီး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (3) , (12) ဈေး , အရှေ့ဘက်တန်း ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း 📞 09-428199136 🍄 တောင်ငူ 🍁 တက်နေခြည်ဆေးဆိုင်🍁 ဈေးလမ်း ၁လမ်းနှင့်ကုန်သည်ကြီးလမ်းကြား🍁 📞09 5352206 ၊ 09 797951343 ။ 🍄 အောင်လံမြို့ 🍁 ရွှေပြည်စိုး(2) ဆေးဆိုင် လမ်းမတော် (၁)လမ်း 📞 09-452399998 🍄 တောင်တွင်းကြီးမြို့🍁 ကိုသိန်းထွန်း ဆေးဆိုင် 🍁 ပြည်လမ်း 📞 09-973500100 🍄 မကွေး 🍁 တူးတူး ဆေးဆိုင် 🍁 တိုင်းဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် ၊ 📞 09-401556740 ။ 🍄 မကွေး 🍁 အာရောဂျံ ဆေးဆိုင် 🍁 ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရှေ့ ။ 📞 09-967956464 🍄 မကွေး 🍁 နိုင်လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ရန်ပယ်ဈေး ၊ အပြင်ဘက်(၂)ထပ်တိုက်တန်း ။ 📞 09-450981868 🍄 ပန်းတနော် 🍁 အေးမေတ္တာ ဆေးဆိုင် 🍁 ဆိုင်ခန်း အမှတ် (1)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ 📞 04630414 ။ 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုစိုးမိုးနိုင် 🍁 ပုသိမ်မြို့ 📞 09-691432688 🍄 ပုသိမ် 🍁 ပါဝါ ဆေးဆိုင် 🍁 E -53 ၊ ကင်မလင်းကျွန်းလမ်းမကြီး 📞 09-422496695 ။ 🍄 ပုသိမ် 🍁 ကိုသူ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (60)၊ ရှင်ပင်ဖုန်းပွင့်လမ်း ၊ မြို့သစ်ဈေးရှေ့ 📞 09-5202099 ။ 🍄 ဟသာင်္တ 🍁 ကိုကြည်ဝင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(၂) တိုင်းရင်းဆေးခန်း ။ ပဒေသာ ဈေးကြီး ရှေ့ ။ မန်းဘခိုင် လမ်း ။ 📞 09-771126372 🍄 ကွမ်းခြံကုန်း 🍁ရာပြည့် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (91) ၊ သုံးပန်လှလမ်း ၊ ဈေးပိုင်း ၊ 📞 09-790138153 ။ 🍄 လပွတ္တာ 🍁 ဦးပေါ်လွင် အပ်ချူပ်ဆိုင် 🍁 ဆိုင်အမှတ် (20)၊ ဘုရားလမ်း ၊ မြို့မဈေးထိပ် 📞 09-252185212 ။ 🍄 မအူပင် 🍁 စောဒေဝီ ဆေးဆိုင် 🍁 ဘုရားလမ်း နှင့် တေဇလမ်းထောင့် ၊ 📞 09-5198025 ။ 🍄 ဘိုကလေး 🍁 နေဝင်းမောင် ဆေးဆိုင် 🍁 (12/13) ဧရာဝတီ (သင်္ဘောဆိပ်လမ်း) 📞 09-429759035 ။ 🍄 ဖျာပုံ 🍁 ထာဝရ ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးရှေ့ ၊ 📞 045- 41176 ။ 🍄 တွံတေး 🍁 ဦးဝေယား ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် ၂၆ ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ 📞 09-420072552 ။ 🍄 သထုံ 🍁 ဒေါ်ညို ဆေးဆိုင် 🍁 📞 057 - 40370 , 09-975457972 ။ 09459551166 အလယ်တန်းလမ်း ၊ အောက်ကြေးရပ်ကွက် ။ 🍄 ဘားအံ 🍁 လန်းဆန်း ဆေးဆိုင် 🍁 ပိတောက်လမ်း , ဇီးတောရပ်ကွက် 📞 09-8731397 🍄 မော်လမြိုင် 🍁 ဦးမောင်ထူး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (11) , မြို့မတံတားလမ်း 📞 057-25966 , 057-25960 , 09-5320921 ။ မော်လမြိုင်မြို့ 🏠အိမ်အရောက်ပို့ မှာယူလိုပါက 👇👇 💰ဝန်ဆောင်ခ - 2000 ကျပ် ☎️ ဖုန်းနံပတ် - 09 256070900 | 09 424870011 🌼 မော်လမြိုင် 💰 နေခြည်သစ် ဆေးဆိုင် 💰 ၃ ထပ်အဆောင်၊ ဒိုင်ဝန်းဈေး 📞 09 259660585 🌼 မော်လမြိုင် 💰 မိုးနတ်သား ဆေးဆိုင် 💰 ရွှေမြိုင်သီရိဈေးအရှေ့ 📞 09 255894244 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဖိုးလပြည့် ဆေးဆိုင် 💰 သမိန်ဘရမ်းလမ်း ၊ မြိုင်သာယာဈေး 📞 09 255841646 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဦစံရင် ဆေးဆိုင် 💰 အောက်လမ်းမကြီး၊ ဈေးကြီးဖက်တန်း 📞 09 255739116 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဆေးဝင်္ကဘာ ဆေးဆိုင် 💰 ဈေးချို ၊ ငန်သေးလမ်း 📞 09 777605982 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ကိုမျိုး ဆေးဆိုင် 💰 ဇေယျာ ၁၊ လမ်းမကြီး 📞 09 443595509 🌼 မော်လမြိုင် 💰 ဇာနည်လျှမ်း ဆေးဆိုင် 💰 သိရီမြိုင် ၈ လမ်းထိပ် 📞 09 450452724 🍄 မုဒုံ 🍁 မွန်ဦး ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (118) , မော်လမြိုင်-သိမ်ဖြူဇရပ် လမ်းမကြီး 📞 09-425261467 ။ 🍄 မြိတ် 🍁 Wai Thinzar Lwin🍁 ဦးသန်းလွင် ၊ အမှတ် ၂၂၅ ၊ (၅) လမ်း ၊ နောက်လယ်ရပ် ၊ 📞 09 -776097948 ။ 🍄 ထားဝယ် 🍁 အောင် ဆေးခန်း 🍁 အမှတ် (65) , အာဇာနည်လမ်း , ရှမ်းမလည်ဆွဲရပ်ကွက် 📞 09-25083321 , 09-458233951 🍄 ကော့သောင်း 🍁 စွမ်းထက် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (68) , ဗိုလ်ချုပ်လမ်း 📞 059-51838 ။ 🍄 မြဝတီ 🍁 ရွှေမန္တလေး ဆေးဆိုင် 🍁 မေတ္တာလမ်း ၊ ဘူရင့်နောင်ဈေးဘေး 📞 09 791611963 🍄 မြင်းခြံ 🍁 ကြယ်နီဆေးဆိုင် 🍁 ကိုးဆောင်တိုက်တန်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ ၊ 📞 066-21759 🍄 ညောင်ဦး 🍁 သရဖူဆေးဆိုင် (2)🍁 လမ်းမတော် , အောင်သိဒ္ဓိရပ်ကွက် 📞 09-458302768 🍄 ပျော်ဘွယ် 🍁 ထွန်းသီရိဆေးဆိုင် 🍁 အနော်ရထာလမ်း , ကျောက်တိုင်တွင်းတောင်ဘက် 📞 09-402551802 🍄 သာစည် 🍁 စိန်သရဖူဆေးဆိုင် 🍁 လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအနီး 📞 09-420318097 🍄ဇီးကုန်း 🍁 ပြည့်ဖြိုး ဆေးဆိုင် 🍁 ထန်းတပင် ၊ 📞 09-402595354 ။ 🍄 တပ်ကုန်း 🍁 ကိုမျိုးသူအောင် 🍁 📞 09-440099412 ။ 🍄 နေပြည်တော် 🍁 က္ကုစာသာယ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေး ။ 📞 09-422467228 🍄 ပလိပ် 🍁 ကောင်းဆု ဆေးဆိုင် 🍁 ပလိပ် ကားဆိပ်နှင့် သံလမ်းဆုံ အနီး ။ 📞 09-760153914 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 ပွဲကတော် ဆေးဆိုင် 🍁 မင်္ဂလာရပ် 📞 067-22658 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား 🍁 လေလှိုင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်လက်ယာလမ်း , ပျဉ်းမနားဈေးအရှေ့ဘက် 📞 09-8300424 ။ 🍄 ပျဉ်းမနား (ဆရာဦးကျော်စိုး ( တဆ-၆၁၃ ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အငြိမ်းစား) 🍁 မိဘရိပ် တိုင်းရင်းဆေးခန်း 🍁 (အကြောအဆစ်နှင့်အထွေထွေရောဂါကု) အမှတ် ၅/၆၂(၁)၊ သံတိုင် ၃ လမ်း ၊ ရွှေတောင်ကြီးစားသောက်ဆိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ ယောက်သွားအင်းရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား၊ နေပြည်တော်။ 📞 09-448537598 🍄 ပခုက္ကူ 🍁ဦးစိုးလွင် 🍁 အမှတ် (11) , ရွှေလမ်း 12-13ကြား 📞 09-43206401 ။ 🍄 မြိုင်မြို့ 🍁 ဆုလာဘ် ဆေးဆိုင်🍁 အမှတ် (3), ဗဟင်းလမ်းဘေး 📞 09-772592526 ။ 🍄 မိတ္ထီလာ 🍁 မဟာဆွေ ဆေးဆိုင် 🍁 အရှေ့ပြင်အရပ် ၊ ဒုတိယလမ်းမတော် ၊ ရေစဉ်ကြီးအနီး ၊ 📞 09-777434084 ။ 🍄 နွားထိုးကြီး 🍁 ကိုကျော်ဇင် ဆေးဆိုင် 🍁 📞09 420704527 KBZ ဘဏ်အနောက် 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 SB ဆေးဆိုင် 🍁 ပါရမီ မလိုင်မုန့်ဆိုင် ဘေးလမ်းကြားထဲ ။ 📞 09-691158714 🍄 ပြင်ဦးလွင် 🍁 ဖိုးလမင်း ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် ဒေါင့် ၊ 📞 09-444042715 ။ 🍄 ကလေး 🍁ထွန်းဆေးဆိုင်🍁 တံတားဦး ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အနီး , 📞 09-420781165 ။ 🍄 ကျိုင်းတုံ 🍁ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (10) , ကြိမ်းလန်း (3) လမ်း 📞 09-5250497 ။ 🍄 ချင်းရွှေဟော (လောက်ကိုင် အနီး) 🍁 နှင်းဧကရီ ဆေးဆိုင် 🍁 လောက်ကိုင်လမ်းဆုံ 📞 09 259665821 ၊ 09 256034838 ။ 🍄 တာချီလိတ် 🍁 BBB ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး , မဂါဘို , ခမ်းရပ်ကွက် 📞 09-428351135 ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း🍁 📞 09-456807704 ၊ 086-21073 ( ဖုန်းဆက်ပြီး သွားဝယ်ပါရန် ) ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၁)🍁 ရုပ်ရှင်ရုံ အနီး မြို့မရပ် ။ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူး ဆေးဆိုင် (၂) 🍁 ပိတ်စွယ် ညောင်ပင်ဈေး အနီး 🍄 မိုးကုတ် - 🍁မတူးတူးဆေးဆိုင် (၃) 🍁 ဆေးရုံ ရှေ့ 🍄 မိုးကုတ် - 🍁ကောင်းသန့်ဆေးဆိုင် 🍁 ရွှေဘုံသာလမ်း ၊ အောင်ချမ်းသာ ဈေးရှေ့ ### မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်း ( ကြပ်ပြင် ) ### - 🍁သိန်းသန်း ဆေးဆိုင် 🍁 မီးသတ်အနီး ပန်းမ -🍁 မေတ္တာမွန် ဆေးဆိုင်🍁 ကြပ်ပြင်ဈေး 09 49352335 🍄 တောင်ကြီး 🍁 ဇွန် ဆေးဆိုင် 🍁 အေးသာယာ GTI သွားသည့် လမ်းမပေါ် GTI မရောက်ခင် 🍄 တောင်ကြီး 🍁 မြတ်သုခ ဆေးဆိုင် 🍁 ဗိုလ်ချူပ်လမ်း ။ 📞 09-254176229 🍄 တောင်ကြီး 🍁 လင်း ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး ။ 📞 09-41003058 🍄 တောင်ကြီး 🍁 တော်ဝင် ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးကြီး 🍄 လားရှိုး 🍁 ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 မကြည်ပြာသိန်း 📞 09-36033309 , 09-788273496 🍄 လားရှိုးမြို့ 🍁 အောင် ဆေးဆိုင် 🍁 ရေးစဉ်အရှေ့ရွှေကံ့ကော်ဈေးရုံ 📞 09-403750084 🍄 လားရှိုးမြို့ 🍁 စေတနာ ဆေးဆိုင် 🍁 ရပ်ကွက် ၁/ နယ်မြေ ၇/ လဝကရုံးလမ်း 📞 09-969557758 🍄 မူဆယ်မြို့ 🍁 ကောင်းဆက် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(1) ဈေးကြီတောင်ဘက် ဗိုလ်တည်းလမ်း 📞 09-78523104 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁ကိုဖြိုး ( ကိုယ်စားလှယ် )🍁 📞 09-400998996 ။ 🍄 ဟုမ္မလင်းမြို့ 🍁 နောင်ဘိုအောင် 🍁 ( ရွှေပြည်အေးမြို့ ၊ နောင်ဘိုအောင် ၊ နမ့်တော့ မှာလည်း ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါသည် ) 🍄 အောင်ပန်း 🍁 စုမြတ် ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ်(113), သိဒ္ဓိယလမ်း ၃ရပ်ကွက် 📞 09 73501633 ။ 🍄 လွိုင်ကော် 🍁 မန္တလေး ပင်ရင်း ဆေးဆိုင် 🍁 အမှတ် (21) , မင်းစီးရပ်ကွက် 📞 09-41007968 ။ 🍄 မုံရွာ 🍁 ကုမုဒြာ ဆေးဆိုင် 🍁 ကျောက်ကာလမ်း ၊ မီးသတ် တိုက်တန်း ။ 📞 09-400413766 🍄 မုံရွာ 🍁 စိုပြေ ဆေးဆိုင် 🍁 ပွဲစားတန်းလမ်း 📞 071-24245 ။ 🍄 စစ်ကိုင်း 🍁ကံ့ကော် ဆေးဆိုင် 🍁 ဈေးလမ်း နှင့် ချင်းစုကျောင်းထောင့် 📞 09-964040129 🍄 ရွှေဘို 🍁 ပတ္တမြား ဆေးဆိုင် 🍁 📞 075 21118 , 09 259142367 ။ ရွှေသိမ်တော်ဘုရားလမ်း 🍄 မိုးကောင်း 🍁 ကိုကျော်ကျော် ဆေးဆိုင် 🍁 ဘူတာအနီး 📞 09-400031885 🍄 ဗန်းမော် 🍁ထွန်းမြန်မာ ဆေးဆိုင် 🍁 အလယ်ရပ်ကုန်းဆင်း , KBZ Bank (2) ရှေ့ 📞 074 - 51285 ။ 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 မြတ်မွန် ဆေးဆိုင် 🍁 ဝင်းသူဇာရှေ့ ၊ ဧရာဝတီဘဏ်ဘေး ။ 📞 09-43021786 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ရှိန် ဆေးဆိုင် 🍁 ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် ။ 📞 09-43021786 🍄 မြစ်ကြီးနား 🍁 ဦးသန်းနိုင် 🍁 ခေမာသီရိရပ်ကွက် 📞 09 43021786 ။ 🍄ဘူးသီးတောင် 🍁 ရှုမဝ ဆေးဆိုင် 🍁 မြို့မဈေးရှေ့ 📞 09-421751451 🍄 မောင်းတော 🍁 ARF -4ဆေးဆိုင် 🍁 📞 09-49658034 ။ 🍄 စစ်တွေ 🍁ကိုယ်စားလှယ်ဖုန်း 🍁 📞 09-421744844 ၊ 09-36124601 ၊ 09-250149102 ၊ 09-421745043 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁ဇဗ္ဘူထွန်းဆေးဆိုင်🍁 မင်းပြားဈေးထဲ 📞 09-421714901 ။ 🍄 မင်းပြား 🍁 ထွန်းဆေးဆိုင် 🍁 မင်းပြားဈေးရှေ့ 📞 09-421721438 ။ --------------------------+++++++++------------------ 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 ❌🤔နာမည်ကြီး ဂျပုမင်းသားအိုကို ပိုက်ဆံတွေပုံပေးကြော်ငြာရိုက်ပြီး ဒီ မင်းသား သုံးနေတဲ့အမေရိကန်ဆေးပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မတန်တဆ ဈေးကြှီးကြီး နဲ့ဘာအာနိသင်မှမပြတဲ့ ဆေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့Comment တွေပြပြီး ဂျင်းထည့် ရောင်းနေတာလည်း တွေ့ နေရပါတယ်နော် !❌🤔 =============================== 🤷‍♂️( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 🤷‍♀️ 💪💪🥙 ကျန်းမာပြီး ခွန်အားဖြစ်စေဖို့မဖြစ်မနေ စားသောက်ရမည့် အစားအစာများ 🥙💪💪 🍉ဖရဲသီး ၊ 🥑 ထောပတ်သီး ၊ 🍌 ဖီးကြမ်း ဌက်ပျော ၊ 🍌 သီးမွှေး ဌက်ပျော ၊ 🥛 ဒိန်ချဉ် ၊ 🍡 ရုံးပတေသီး ၊ 🔅 ဂျင်း ၊ 🥕မုန်လာဥနီ ၊ 🥓 ငါးရှဉ့် ခြောက်စပ် ၊ 🥜 ဗာဏာစေ့ ၊ 🥐သစ်ကြားသီး ၊ 🥜သီဟိုစေ့ တို့ကို မိမိ တစ်ပတ် စားသောက်သည့် အစားအသောက်များထဲတွင် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်မျိုး သို့ 3️⃣ သုံးမျိုး ပါအောင်စားပေးရပါမည် ။ 🍅 ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ကို နေ့ တိုင်းထမင်းနှင့် အတူ အနည်းဆုံး 1️⃣ ကြိမ် ( နေ့ လည်စာ ) စားပေးရပါမည် ။ 1️⃣ တစ်ရက်လျှင် ရေ အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်လီတာ သောက်ပေးရမည် ။ ❌ ဆေးလိပ် ၊ အရက်၊ ကွမ်း စသည်တို့ သည် ယောင်္ကျားဟော်မုန်း ၊ ယောင်္ကျားခွန်အား နှင့် စွမ်းဆောင်အားတို့ ကို ဆိုးရွားစွာကျဆင်းစေပါသဖြင့် ရှောင်ရပါမည် ။ ❎ မရှောင်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံး 5️⃣0️⃣ % လျော့ရပါမည် ။ 🍷ဝိုင်အနီ တစ်ရက်လျှင် ဝိုင်ခွက် 2️⃣ ခွက်သောက်ပေးပါက ကောင်းပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 3️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 1️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။ ☑️အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံစွဲးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 9️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 6️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။များသောအားဖြင့် ( 8️⃣0️⃣ % ခန့် မှာ ) 6️⃣ ဘူးသောက် 4️⃣ ဘူး လိမ်းရုံဖြင့် ရောဂါ ပျောက်သွားကြပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 2️⃣ ပတ် မှ 3️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါဟန်းနီး 2️⃣ ဘူးသောက် ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 3️⃣ ပတ်မှ 5️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ============================== ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) ကျပ် တစ်ထောင်တည်းနဲ့တစ်ညလုံး7ခါ 8 ခါ တောင် မမောမပန်းနဲ့လန်းလို့ ရတဲ့ တခါသုံး 💜 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 💜 သောက်ဆေးတွေ မှာဝယ်လို့ ရပြီနော် ! ( ရပ်ကြည့် လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာ နော် ! ) 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 💰 16,000 ကျပ် 🚩 ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် 🚩 လေစုပ်ပြွန် လက်ဆွဲပန့် (ရိုးရိုး) - တလုံး 27,000 ကျပ် 🚩 လေစုပ်ပြွန် မော်တာဆွဲပန့် (ရှယ်) - တလုံး 36,000 ကျပ် အမျိုးသမီးအင်္ဂါကျဉ်း ရောဂါကင်း မွှေးဆေး 🚩P-V Care Gel (ပီဝီကယ်ယား ဂျယ်လ်) 90ml - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☎️ ဖုန်းနံပတ်များ 09 256070900 , 09 73206348 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ထိုင်း နဲ့မလေး မှာ အိမ်အရောက်ပို့ စနစ် နဲ့ဝယ်လို့ ရပြီ နော် ! 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013089 နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါလိုးရှင်း 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013306 နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =============================== 🤐 အပေါက်တွေ ဖါတယ် ! အပြဲတွေ ချူပ်တယ် ! 🤐 👍 ( တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး အာယုဝေဒ တိုင်းရင်းဆေး ! ) 👍 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 =============================== 🤷‍♂️( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 🤷‍♀️ 🏠အိမ်အရောက်ပို့ မှာယူလိုပါက 👇👇 💰ဝန်ဆောင်ခ - 2000 ကျပ် ☎️ ဖုန်းနံပတ် - 09 256070900 , 09 73206348 *************************************************** 🌿လချီထားလည်းသစ်ရွက်မနွမ်းသွားဘူးဆိုတာ ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြထားတဲ့ 🍁 " မိန်းမ မအိုဆေး " 🍁 👍 ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 👍 🌷မိန်းမတိုင်း မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေး !🌷 🍌 တသက်လုံး အပျိုစင်လေးလို အမြဲ နုပျို လန်းဆန်း နေပြီး အိမ်က ယောင်္ကျားကို မလှုပ်နိုင်အောင် ချူပ်ကိုင် ထားချင်ပါသလား ? 🍌 🙋‍♀️🙋‍♀️ အမျိုးသမီးတွေ ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်အရောက် ဆေးမှာချင်ရင် ဖုန်းပြောတဲ့ အခါအမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း နဲ့ ပြောလိုပါတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်သူကို ပြောလိုက်လို့ ရပါတယ်နော် ! 🙋‍♀️🙋‍♀️ ================================ 🌺 အမျိုးသမီးသုံး PV Care Gel 🌺 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 014510 ( 1221 ) နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 🚩 တစ်ဘူး ဆိုရင် ၂ လ သုံးလို့ရပြီး ရောင်းဈေးက တစ်ဘူးကို 💰 21000 ကျပ် ပါ ❗️ 💙💙 ပရိုမိုးရှင်း ရှိပါတယ် ! 🚩2️⃣ ဘူးဝယ်ရင် 🚩3️⃣ ဘူးရပါတယ်နော် ! 💙💙 🥀လိမ်းရင် ရရှိနိုင်မဲ့ အကျိုးကျေးဇူး🥀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌹အမျိုးသမီး အဂါင်္ကို အမြဲ မွှေးကြိုင်နေစေပြီး ရောဂါ ကင်းစေပါတယ် ! အဖြူဆင်းတာ အနံ့အသက် ထွက်တာတွေ လုံးဝ မဖြစ်တော့ပါဘူး ❗️ 🌹 လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်တက်တဲ့ ရောဂါတွေ မဖြစ်ဖို့ 90% ကာကွယ်ပေးပါတယ် ❗️ 🌹 လျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းနံရံတွေ အတွင်းနဲ့ အပြင်မှာ မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးရုံနဲ့ (45) ရက်အတွင်း အပျိုစင်လေးလို ပြန်လည် တင်းရင်းစေမဲ့ အခြေအနေလေးကို ပြန်ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹 အမျိုးသမီး အဂါင်္အတွင်း PH Level ကို အမြဲတမ်း 4.5 မှာ ထိန်းညှိပေးထားမှာ ဖြစ်လို့ အခြား ဘာ PH Care မှ သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး ❗️ 🌹 သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းမှလည်း 95% လောက် ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ 🌹 ကိုယ့် ယောင်္ကျား ၊ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်ကလွဲလို့ တခြားဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်မဝင်စား နိုင်လောက်အောင်ကို စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ် ❗️ 🌹အိမ်ထောင် မရှိတဲ့ အပျိုတွေ သုံးရင် အသက်ကြီးလာသည်အထိ တင်းရင်းပြီး အနံ့အသက် ကင်းစင် ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီး အဂါင်္ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရနိုင်တဲ့ရောဂါ နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း တွေကိုလည်း ၉၅ % လောက် ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 🌈 P V Care Gel (ပီဗီကယ်ယား ဂျယ်လ်) ဆေးသုံးရန် အညွှန်း ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌸 ကလေး မွေးပြီး တစ်လကျော်ရင် စသုံးလို့ ရပါပြီ ! 🌸 အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အတွင်းဘက် နံရံတွေကို လက်ညိုးနဲ့ ဆေးအနှစ် နည်းနည်းယူပြီး သုတ်လိမ်းပေးရပါမယ် ! ပြီးရင် အပြင်ဘက်ပါ အနည်းငယ်လိမ်းလိုက်ပါ။ မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ ကြိမ် လိမ်းရပါမည် ! နောက်တစ်ကြိမ် မလိမ်းမှီ ပထမ တစ်ကြိမ် လိမ်းထားပြီးသားကို ရေနဲ့ ဆေးချရပါမယ် ! ဆိုလိုတာက နေ့စဉ် … မနက် လိမ်းထားတာကို ည ကျရင် ဆေးချ ၊ ည ပြန်လိမ်း။ ည လိမ်းထားပြီးသားကို မနက် ပြန်ဆေး၊ ပြီးရင် တခါထဲ မနက် ပြန်လိမ်းပါ။ 🚦မှတ်ချက်။ ။ ရာသီလာချိန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လုံးဝ မလိမ်းရပါ။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ♦️ မိန်းမများအတွက် ♦️ ➖➖➖➖➖➖➖ 🌐 ကမ္ဘာတဝှမ်း အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေကြတာကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း နှင့် ယောင်္ကျား များနှင့် ဆက်ဆံ ခါ များလာသည့်အခါ အင်္ဂါ တွင်း နံရံများ ရော့တွဲလာကြသဖြင့် မိမိခင်ပွန်းမှ မိမိအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိတော့ခြင်း စတာတွေက အဖြစ်များနေကြပါတယ် ! 🤱 ကလေး မွေးတဲ့အခါ ရိုးရိုးမွေးပြီးတော့ ပြန်ချုပ်ထားရင်လည်း အမျိုးသမီး အဂါင်္ အတွင်းသားတွေဟာ ပျော့တွဲပြီး Elastic ဖြစ်သွားလို့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားမှု အပြည့်အဝ မပေးနိုင်ကြတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ် ❗️ 🤦‍♀️ အဲ့လိုအခါမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသားရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ တွေ့ကြုံရတက်ပါတယ် ❗️ 🙅‍♀️ အဲ့လို အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ မဖြစ်ကြရအောင် အမျိုးသမီးတွေ ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း အပျိုစင်လေး တစ်ယောက်လို မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားကို အိမ်ထောင်ရေး သုခ အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ကြပြီး အိုမင်းသည်အထိ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်အောင် SKY LARK က စေတနာ မေတ္တာအပြည့်အ၀နဲ့ အမျိုးသမီး သုံး P V Care Gel ( ပီဝီ ကယ်ယား ဂျယ်လ် ) ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ပြီး 11 လ ပိုင်း 2017 မှ ဈေးကွက်ထဲ စတင် ရောင်းချပေး နေပါတယ် ! နောက်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ P - V Care နဲ့အတူ အမျိုးသမီး အင်္ဂါက အမွှေးတွေကို သဘာဝ နည်းနဲ့ အမြဲအတွက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့ P-V clean အမွေးဖယ်ရှားဆေး ကိုပါ လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MICKY PAPER SOAP 25 Sep 2020 · 15M views
မ​နေ့တ​နေ့ကလိုပဲ အခုထိရှိ​နေသလိုခံစားရတယ်​ သူ​ ဆုံးပြီဆို​တာကြားမိ​တော့..ကိုယ့်​​သွေးသားရင်း​တစ်​​ယောက်​ ဆုံးရူံးသွားသလိုခံစားရတယ်​ အခုချိန်​ထိ သူ့ကား​တွေဆို တပ်​မက်​စွာ ကြည့်​​နေတုန်းပဲ ဘယ်​​တော့မှ အစားထိုးမရတဲ့ အနုပညာ​ရှင်​တသ်​​ယောက်​ အခု​တော့ သူ့ဆုံးသွားခဲ့တာ ဒီ​နေ့ဆို ၁၀ နှစ်​ပြည့်​ခဲ့ပြီ သူ့သာ ရှိ​သေးရင်​ သူ့ဘာ​တွေလုပ်​မလဲ သိချင်​မိတယ်​ #11.7.2017 #​ဒွေး Credit >>> Mg Ka Gyi ညီမလေး ပြိုင်ပွဲလေးဝင်ထါးလို့အောက်ကစာတန်းမဲမဲလေးကိုဖိပီးLikeလုပ်ပေးပါနော်အကူညီတောင်းတာပါရှင့် :-) 😔😔Like ဝင်ပေးရန် Link က 🔜 https://www.facebook.com/anycallmobile/posts/1395603793864057 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
မ​နေ့တ​နေ့ကလိုပဲ အခုထိရှိ​နေသလိုခံစားရတယ်​ သူ​ ဆုံးပြီဆို​တာကြားမိ​တော့..ကိုယ့်​​သွေးသားရင်း​တစ်​​ယောက်​ ဆုံးရူံးသွားသလိုခံစားရတယ်​ အခုချိန်​ထိ သူ့ကား​တွေဆို တပ်​မက်​စွာ ကြည့်​​နေတုန်းပဲ ဘယ်​​တော့မှ အစားထိုးမရတဲ့ အနုပညာ​ရှင်​တသ်​​ယောက်​ အခု​တော့ သူ့ဆုံးသွားခဲ့တာ ဒီ​နေ့ဆို ၁၀ နှစ်​ပြည့်​ခဲ့ပြီ သူ့သာ ရှိ​သေးရင်​ သူ့ဘာ​တွေလုပ်​မလဲ သိချင်​မိတယ်​ #11.7.2017 #​ဒွေး Credit >>> Mg Ka Gyi ညီမလေး ပြိုင်ပွဲလေးဝင်ထါးလို့အောက်ကစာတန်းမဲမဲလေးကိုဖိပီးLikeလုပ်ပေးပါနော်အကူညီတောင်းတာပါရှင့် :-) 😔😔Like ဝင်ပေးရန် Link က 🔜 https://www.facebook.com/anycallmobile/posts/1395603793864057 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 မြန်မာ့သတင်းထူးသတင်းဦးများ 11 Jul 2017 · 583K views
သင်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှု့ ​လေး ​တွေ ရှိ .........? မရှိ ............? Scorpion "4Mar 2020 · 488K views
ဘဒ္ဒန္တဝိမလ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ( ကန်ဦး ) ထပ်ဆင့် မျှဝေပါသည်။ ရှဲ ပေးလိုက်ပါ
ဘဒ္ဒန္တဝိမလ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ( ကန်ဦး ) ထပ်ဆင့် မျှဝေပါသည်။ ရှဲ ပေးလိုက်ပါ ပြည်မြို့နယ်သတင်း 8 May 2020 · 3.7K views
ကိုးတန်းမှာ သုံး​ကောင်​.. ဆယ်​တန်းမှာ တစ်​​ကောင်​.. စုစု​ပေါင်း ​လေး​ကောင်​ကို က​လေး​တွေ သင်​ရတယ်​။ ဘာ​တွေလဲဆို​တော့ Protozoa ​တွေ​ပေါ့။ သူတို့ကို သီးခြား Protista ​လောကမှာ ထည့်​သွင်းထား​ပေမယ့်​ အံ့သြစရာ​ကောင်းတဲ့ ဆဲလ်​တစ်​လုံးတည်းပါသက်​ရှိ​တွေပါပဲ။ ကိုယ်​တိုင်​အစာချက်​စားသူ ရှိသလို သူတို့ကို အမဲလိုက်​တဲ့ Protist ​တွေလည်းရှိ​သေးသတဲ့။ ဆန်းကြယ်​လိုက်​ပါဘိ။ ကြည့်​လိုက်​ရ​အောင်​​ဗျာ။ Dr. Kyaw Nyi Nyi Latt3May 2017 · 5.9K views